Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya oo cambaareysay weeraro ka dhacay Magaaladaasi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Dimishiq ee dalka Suuriya oo cambaareysay weeraro ka dhacay Magaaladaasi.
War-saxaafadeed kasoo baxay Safaaradda Soomaaliya ee Magaaladda Dimishiq, ee caadimada dalka Suriya, ayaa lagu cambaareeyay weeraro ka dhacay Magaalooyinka Tartous iyo Jableh ee Suuriya , Todobaadkii lasoo dhaafay.
” Safaaradda weey ka war-heysaa in dhaqamada noocaasi ee falal-dambiyeedyada ka dhanka ah Walaalaha Suuriya ay fuliyaan kooxda Takfiri. Dadka Suuriyaanka waxaa ay lamid yihiin dadka Soomaalidda oo kale, oo ka cawanaya dagaalo sokeeye mudo labaatameeyo sano” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Sidoo kale safaarada waxaa ay sheegatay in Hogalladaasi weerarada ah in ay yihiin danaha Israel iyo Cadowga Wadamada Carabta.
Qaraxyada ayaa waxaa ay dhaceen, 23 bishaan May, waxaana lala eegtay Magaalooyin xeebeedyada Tartous iyo Jableh, waxaana ku geeryooday kuna dhaawacmay toboneeyo ruux oo u dhashay dalkasi Suuriya.
Safaarada Soomaaliya ee Magaalada Dimishiq ee caasimada dalka Suuriya, ayaa sanadadii lasoo dhaafay aheeyn mid si caadi ah u howgalleyda, waxaana ay la socotay muwaadiniinta soomaalida ah ee dalkaasi ku nool.
Dowladaha suuriya iyo Soomaaliya, ayaa waxaa ka dhexeeya cilaaqaad aad u sareeya, oo xaga diplomaasiyada ah.
Webmaster 17125 posts 0 comments
Maxkamada ciidamada qalabka sida oo xukuntay dadkii ka dambeeyay qaraxii Daallo
Dhageyso: Warka duhurnimo ee radio Dalsan